Sandesh Prabhahसिरहाको सिमावर्ती नाका बरियारपट्टी सिल गर्ने तयारी Sandesh Prabhah
सिरहाको सिमावर्ती नाका बरियारपट्टी सिल गर्ने तयारी
लहान बैशाख १४- सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिकामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल वेस क्याम्पले करोना भाइरस महामारी बढदै जादा नाका ( बोर्डर ) सिल गर्ने तयारीमा देखिएको छ। उता भारतीय सिमा सुरक्षा बल ( एस. एस. बी )ले पनि बोर्डर ( नाका ) सिल गर्ने तयारीमा देखिएको छ।
आज बरियारपट्टी नाकाका ( स. ई. ) सव इन्सपेक्टरका अनुसार म नाकाबाट प्रत्यक्ष रुपमा कुनै प्रकारको सरसामान , खाद्यान्न अथवा मान्छे सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाइएको छु। यो सँगै करोना भाइरसमा मास्क लगाउने अनिवार्य देखिएको छ। प्रहरीले सिमानाका रोक लगाएता पनि मानिस आवतजावत पनि सुस्त देखिएको छ।
अहिले भारतीय बजार लदनियाँमा सुन्नसान्न समेत देखिएको छ। अता खाद्यान्न आपूर्ति नहुदा मानिस तथा सर्व साधारणमा जुहो टार्न समस्या देखिएको छ। अहिले करोना कहरमा भारतीय बजारमा नेपाली नोटको चर्को मुल्य समेत काटिएको देखिएको छ। मानिस तथा पैदल यात्री बोर्डरबाट फर्किए पछि तनाव रहित जनतामा निराश तथा जीवन काट्न धो धो रहेको देखिएको छ।
मान्छे बजार तथा अन्य विशेष कामले जान नमानेपछि सर्वसाधारण हन्डरको सिकार समेत हुने गरेको छ। आज प्रत्यक्ष अवलोकन गर्दै गर्दा दुवै सुरक्षा प्रहरी बीच कुरा नमान्नेलाई लठ्ठी चार्ज गर्नु पर्छ भन्ने सम्झौता भएको छ।
पोष्ट अवलोकन : 118